Kirin 810 ဟာရက်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲ Huawei Nova5ကိုစတင်မိတ်ဆက်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီ Androidsis
အတိတ်ကဖြစ်ရပ်များတွင်ကျွန်ုပ်တို့ပြောခဲ့ပြီးပြီ Huawei က Nova 5မကြာမီတွင်ဈေးကွက်တွင်ခိုင်မာသည့်ပြိုင်ဘက်တစ် ဦး အဖြစ်မကြာမီထွက်ပေါ်လာတော့မည့်အလယ်အလတ်တန်းစားဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့်စမတ်ဖုန်းဖြစ်လာမည်ဟုမျှော်လင့်ရသည် တစ်ပါတ်အတွက်အရာရှိတ ဦး ကပေါ်လွင်ကပြောသည်ထားပြီးပေမယ့်နှင့် 710 ၎င်းတွင်တပ်ဆင်ထားမည့်ပရိုဆက်ဆာအသစ်ဖြစ်သောအချက်အလက်များအရသိရှိရသည် Huawei သည် Kirin 810 ကိုဖုန်းပေါ်တွင်ကြေငြာလိမ့်မည်.
လက်ရှိတွင် Huawei သည် Kirin 710 ကို၎င်း၏အလယ်အလတ်အကွာအဝေးတွင်တပ်ဆင်ထားသည်။ ၎င်းသည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးလွှတ်တင်မှုများပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းကြောင့်၎င်းပရိုဆက်ဆာကိုသာတရုတ်ကုမ္ပဏီ၏အလယ်အလတ်တန်းစားအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းကိုမြင်တွေ့ရသည်မှာအတော်လေးပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေသည်။ 6xx နှင့် 7xx စီးရီးမှတစ်ခုစီသည်အခြားတစ်ခုထက်ပိုသာသည်။
Nova 5i Kirin 710 ဖြစ်ပါတယ်။
Nova5Kirin 810 ဖြစ်ပါတယ်။
Nova 5Pro Kirin 980 ဖြစ်ပါတယ်။
- Teme (特米) (@ RODENT950) ဇြန္လ 13, 2019
Kirin 710 သည်စွမ်းအားအရ Snapdragon 660 နှင့်ယှဉ်ပြိုင်သည်။ Huawei chipset ရရှိသောစွမ်းဆောင်ရည်သည်အလွန်ကောင်းမွန်ပြီး Qualcomm ကတ်တလောက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ပို၍ ရှင်းလင်းသောစိတ်ကူးရှိသည်။ အဆုံးစွန်သောထုတ်လုပ်သူများတွင် SD665, SD670, SD675, SD710, SD712, SD730 နှင့် SD730G, 6xx မိသားစုမှစွမ်းဆောင်ရည်နိမ့်သူများအပြင်အားလုံးသည်အလယ်အလတ်တန်းစားကိုရည်ရွယ်သည်။ သူကပြောခဲ့သည်, တရုတ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုက monotony ထဲကနေရဖို့အခြားရွေးချယ်စရာတင်ပြရန်ရှိသည်, ဒါကြောင့်အထက်ပါဖော်ပြခဲ့လိမ့်မည်ပုံရသည် 810.
အတိုင်း @ RODENT950, Nova5ကို Kirin 810 မှမောင်းနှင်မည်ဖြစ်သည်။ ဒီပရိုဆက်ဆာကိုတင်ပြမထားဘူး။ Kirin 710 ရဲ့ဆက်ခံသူလည်းဖြစ်တယ်။ ဆု y က7nm ။ ၎င်းသည် Qualcomm ၏ Snapdragon 730 နှင့်တိုက်ရိုက်ယှဉ်ပြိုင်မည်ဖြစ်သည်။
သတင်းအချက်အလက်ကိုလည်းဖော်ပြသည် nova 5iအခြားအကြောင်းများစွာပြောခဲ့သည့်အခြားမိုဘိုင်းတစ်ခုသည် Kirin 710 နှင့်အတူရောက်ရှိလိမ့်မည် Nova5Pro, အတိုးတက်ဆုံးသောမူကွဲသည်အကျိုးကျေးဇူးများအားလုံးခံစားနိုင်မည့် high-end ဖြစ်လိမ့်မည် 980 ကမ်းလှမ်းမှု။ သို့သော်ဤအရာအလုံးစုံကိုအတည်ပြုခံရဖို့ရှိပါတယ်; Huawei ကတော့ဘာမှမပြောပါဘူး။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » Kirin 810 သည်ရက်အနည်းငယ်အတွင်း Huawei Nova5တွင်စတင်မိတ်ဆက်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်လိမ့်မည်